Inkonzo—Ngaba Kunyanzelekile Ukuba Ube Nayo? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUrhobo IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ewe, kuba uThixo ufuna abantu bahlanganisane ukuze banqule. IBhayibhile ithi: “Kanjalo masinyamekelane, sivuselelane eluthandweni nasemisebenzini emihle, singakutyesheli ukuhlanganisana kwethu ndawonye.”—Hebhere 10:24, 25.
UYesu wabonisa ukuba abalandeli bakhe babeza kuba yintlangano xa wathi kubo: “Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam—ukuba ninothando phakathi kwenu.” (Yohane 13:35) Ukuze babonise olu thando, abafundi bakaKristu kwakuza kufuneka badibane namanye amakholwa. Xa benqula, babeza kudibana ngokwamabandla. (1 Korinte 16:19) Xa bebonke, babeya kuba yintlangano yabazalwana esehlabathini lonke.—1 Petros 2:17.
Kufuneka okungakumbi kunokuba ngowenkonzo ethile
Nangona iBhayibhile ibonisa ukuba simele sihlanganisane ukuze sinqule uThixo, ayifundisi ukuba umntu angamkholisa uThixo ngokuthi abe lilungu lenkonzo nje kuphela. Ukuze samkeleke kuThixo, inkonzo yomntu imele ichaphazele ubomi bakhe bemihla ngemihla. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi: “Unqulo oluhlambulukileyo nolungadyobhekanga ngokwembono kaThixo noBawo wethu lulo olu: ukuvelela iinkedama nabahlolokazi embandezelweni yabo, nokuzigcina ungenabala kulo ihlabathi.”—Yakobi 1:27.
Kutheni AmaNgqina KaYehova Engathi Yicawa Nje Indawo Akhonzela Kuyo?
Funda ukuba livela phi ibinzana elithi “iHolo YoBukumkani yamaNgqina kaYehova” nesizathu sokuba silisebenzisa.
Ngaba uThixo iyamchaphazela into yokuba sisebenzisa imifanekiso okanye izithixo xa simnqula?